ရေချိုး Archives - BuzzFeed Myanmar
ရေချိုး တဲ့အခါတိုင်း ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ မှားယွင်းတဲ့ အလေ့အထ (၅)ခု
ရေချိုးတဲ့အလေ့အထနဲ့ ရေချိုးခန်းယဉ်ကျေးမှုဟာ ရှေးခေတ်အီဂျစ်ပြည်ကနေ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်က ရေချိုးခြင်းဟာ နတ်ဘုရားနဲ့ပိုမိုနီးစပ်စေပြီး ၀ိညာဉ်ကိုသန့်စင်စေတယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့ကြတာကြောင့် တစ်နေ့ကို ရေးသုံးခါချိုးကြောင်း လေ့လာသိရှိရပြီး ရေချိုးခန်းအလေ့အထကို စတင်ခဲ့တာကြောင့်လည်း လူ့ယဉ်ကျေးမှုမှတ်တိုင် တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရောမခေတ်ကလည်း အိမ်ဆောက်တဲ့အခါ အပူပေးခန်းတွေ ရေကူးကန်တွေ တည်ဆောက်ခြင်းကိုလည်း နှစ်သက်လိုလားခဲ့ကြပါတယ်။ ရောမတွေရဲ့ တချို့ရေချိုးခန်းတွေဟာ စာကြည့်ခန်း၊ ဥယျာဉ်၊ စားသောက်ခန်းတွေတောင် ပါဝင်ပြီးတော့ ယောကျာ်းရော မိန်းမရော အတူတကွ ရေချိုးပျော်ပါးနေတာကို ရောမဇာတ်ကားတွေမှာ ဦးစားပေးအနေနဲ့ မကြာခဏတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အလယ်ခေတ်ကာလ ရောက်လာတဲ့အခါ အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ အိမ်တိုင်းလိုလို ရေပန်းနဲ့ ရေချိုးတဲ့အလေ့အထဟာ တဖန်ပြန်လည်ခေတ်စားခဲ့ပါတယ်။
သင်မသိသေးတဲ့ AAMIR KHAN အကြောင်း
ဘောလီဝုဒ် တွင် နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင် မင်းသား ဖြစ်ကြတဲ့ “ခန်” သုံးခန်အနက် သင်မသိသေးတဲ့ Aamir Khan ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်းလူတိုင်းရေချိုးခြင်းကို ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ရေပိုချိုးလေး ပိုပြီးသန့်လေလို့လည်း ထင်နေကြပါတယ်။ တစ်ရက်
လောက် ရေမချိုးမိရင် ထိုရေမချိုးသူကို ဝေဖန်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ္ပံပညာရှင်များရဲ့ အဆိုအရ နေ့တိုင်း
တဘက်တွေကို ဘယ်လောက်ကြာရင် ပြန်လျှော်ကြမလဲ
ရေချိုးပြီးတိုင်း အသုံးပြုတဲ့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ (တဘက်)တွေကို မကြာခဏလျှော်ဖြစ်နေလား? ဒါမှမဟုတ် အချိန်ကြာကြာ အသုံးပြုပြီးမှ လျှော်ဖြစ်နေသလား? တဘက်တွေကို သန့်ရှင်းနေအောင် ထိန်းသိမ်းတတ်မယ်ဆိုရင်တော့ မကြာခဏလျှော်ဖို့ မလိုပါဘူး။
အိမ်အကူလေးရေချိုးနေစဉ် ဗွီဒီယိုခိုးရိုက်တဲ့ အိမ်ရှင် ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ် ကျခံရ
အိမ်အကူလေး က အသက် ၂၈ နှစ်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသူ။ အလုပ်ရှင် က အသက် ၅၂ နှစ်။ ကနေဒါနိုင်ငံသား။ စင်ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်နေသူ။ သူဟာ ကင်မရာသေးသေးလေးကို အိမ်အကူလေးတစ်ယောက်ပဲအသုံးပြုတဲ့ မီးဖိုချောင်နဲ့ ဆက်လျက်က ရေချိုးခန်း အိမ်သာထဲမှာ ထည့်ထားတယ်။
မေမေတို့ အဓိက သိထားသင့်သည့် မွေးကင်းစ ကလေး ရေချိုးနည်း ..!
ရေချိုးနေချိန်မှာ ကလေး ကို စကားပြောပေးပါ။ ဥပမာ သမီးလေးရေ.. ရေချိုးတော့မယ်.. ရေချိုးရတာ ကောင်းတယ်နော်..ပျော်လားသမီးရေ..နဲနဲလေး ကြီးလာရင် ရေဆော့တတ်လာပီ ဆိုရင်..ဟယ်..သိပ်တော်တဲ့ သမီးလေး… ရေဆော့တတ်နေပီ..အစရှိသဖြင့် ကလေးတွေကို စကားပြောပီး ရေချိုးပေးပါ။ ဥာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးစေပါသည်။